Toe-draharaham-pirenena: manahy fipoahana krizy ny CFM | NewsMada
Toe-draharaham-pirenena: manahy fipoahana krizy ny CFM
Tsy afaka ny hangina. Naneho ny ahiahiny manoloana ny raharaham-pirenena ny eo anivon’ny Filankevitry ny fampihavanana (CFM). Nambaran’izy ireo fa efa misy ny dingana nirosoan’izy ireo amin’izao fotoana izao.
« Ahina ny krizy sosialy manoloana ireo hetsika samihafa mahazo vahana amin’izao fotoana izao. Eo ny disadisa sy ny fitokonana samihafa ka mananontanona ny krizy eto amin’ny firenena », hoy ny filohan’ny CFM, i Maka Alphonse, omaly. Nanteriny fa iaraha-mahalala ny zava-misy, indrindra ny lafiny politika ary niekeny fa manomboka miakatra ny maripana. « Mihamafy ny fifampihantsiana ary hita taratra izany eny amin’ny tambajotran-tserasera sy ny haino aman-jery”, hoy ihany izy.
Ilaina ny fitoniana eto amin’ny firenena
Manoloana izany, nampanantena ny eo anivon’ny CFM fa hitady vahaolana niainga amin’ny fivoriana nifanesy nataon’ny birao maharitra sy ireo mpikambana sasany. Anisan’izany ny antso avo nataon’izy ireo. « Aoka hapetraka ny fitoniana eto amin’ny firenena. Ilaina ny fifanatonana sy ny fifampiresahana ary ny fifampihainoana hisorohana ny fifandonana sy ny tsy hiverenan’ny krizy », hoy ihany ny CFM. Anisan’ny antsoin’izy ireo ho amin’izany fifanatonana izany ny mpanohitra sy ny raiamandreny am-panahy, ireo raiamandreny ara-drazana, ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina.
Fanelanelanana eo amin’ny mpitondra sy ny mpanohitra
Nanteriny fa zava-dehibe izany fifampiresahana izany. Notsiahiviny fa efa nisy ny dingana nataon’ny CFM amin’ny fanelanelanana ny mpanohitra sy ny mpitondra ary mbola mitohy hatrany izany amin’izao fotoana izao, hikaroham-bahaolana.
Tsiahivina fa nanomboka, omaly etsy Ampefiloha, ny fivoriana ara-potoana eo anivon’ny CFM ary haharitra telo volana izany. Manohy ny asany amin’ny fampihavanana hatrany ity rafitra ity.